Kaddib goolkii El Clasico Cristiano Ronaldo ayaa ka sita Lionel Messi!…(Aqriso tiro koobkan) – Gool FM
Kaddib goolkii El Clasico Cristiano Ronaldo ayaa ka sita Lionel Messi!…(Aqriso tiro koobkan)
Byare April 4, 2016
(Spain) 04 Abriil 2016. Kaddib goolkii caaqibada lahaa uu dhaliyay Cristiano Ronaldo kulankii El Clasico ee dhawaan ka dhacay Camp Nou kaa oo guul u horseeday kooxda Real Madrid ayaa waxa uu laacibka ka goolal batay midka ay coltamaan ee Lionel Messi.
Labada laacib ee ugu fiican kubbada cagta adduunka ee waqtigan ayaa waxay ciyaareen 25 Clásicos tan iyo sidii uu Ronaldo ugu soo biiray horyaalka La Liga xilli ciyaareedkii 2009-10.
Kabtanka reer Portuugal ayaa wuxuu dhaliyay 16-gool kulamada El Clasico, halka kabtanka Argentina Messi uu dhaliyay 15-gool.
Dhanka kale marka la eego dhammaan kulamada ay ciyaareen labada laacib tan iyo sidii uu Ronaldo u yimid horyaalka Spain waxaa weli gacan sareeya dhaliyaha reer Madrid.
Ronaldo wuxuu saftay 231-kulan wuxuuna dhaliyay 254-gool (Isku cel-celis 1.10 –gool kulankiiba), Messi ayaa isna saftay 232-kulan wuxuuna dhaliyay 253-gool (Isku cel celis 1.09-gool kulankiiba).
Sidoo kale xiddigahan aan kala dhicin ayaa wadaagay 6-dii Pichichi Trophy ee ugu dambeeyay (Gool dhalinta horyaalka Spain), Messi wuxuu ku guuleystay 2009-10, 2011-12 iyo 2012-13, halka Cristiano uu jeebka gishtay abaal marintaa 2010-11, 2013-14 iyo 2014-15.
Wiilka reer Portugal ayaa sidoo kale haya wadadii uu markale abaal marintan ku qaadan lahaa sanadkan maadaama uu leeyahay 29-gool La Liga, saddex ayuu ka sarreeyaa midka ugu soo dhow Luis Suarez 26-gool, 7-gool ayuuna ka sarreeyaa Lionel Messi.
Henry: Shaki ayaa hada ku beermay Barcelona... Muxuu ula jeedaa?)
BAL EEG: Yaa garoomada ku soo laabtay!?